सन् २०१८ का केही प्रश्नहरु-Setoghar
सन् २०१८ का केही प्रश्नहरु
एजेन्सी । सन् २०१८ मा विश्वमा थुप्रै महत्वपूर्ण घटनाहरु भएका छन् । त्यसमध्येका केहीले तात्कालीन रुपमा चर्चा पाएपनि परोक्ष रुपमा कुनै असर नगर्ने अवस्था रहेको छ । तथापि कतिपय घटनाले भने यो वर्षले आगामी दिनलाई केही प्रश्नहरु छोडेर गएको समेत पाइएको छ ।
विश्वको महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा चिनिएको अमेरिकाले लिएका कतिपय नीतिले गर्दा त्यसले बाँकी विश्वलाई पनि आगामी दिनमा प्रभावमा पार्ने संकेत पाईएको छ । जस्तो कि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि भर्खरै सकिएको डिसेम्बर महिनामा विश्वका कुनैपनि मुलुकमा आफ्ना सेना लग्नु अघि त्यो देशले अमेरिकालाई रकम तिर्नुपर्ने घोषणा गरेका छन् ।
विश्वका थुप्रै विषयमा अमेरिका अग्रणी रुपमा रहँदै आएकोमा व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका राष्ट्रपतिको यो भनाईले आगामी दिनमा आतंकवादसँग लडिरहेका मुलुकहरुमा कस्ताो प्रभाव पर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । जस्तो कि तालिवानको निशानामा परिरहेको अफगानिस्तानमा अमेरिकाले लामो समयदेखि सैनिक पठाएर त्यहाँको संस्थापन पक्षलाई मद्यत गर्दै आएको छ। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँ रहेका १४ हजार अमेरिकी सेना मध्ये ७ हजार फिर्ता गरिने बताएका छन् भने अमेरिकाले आतंकवादीको सूचीमा राख्दै आएको इस्लामिक स्टेट(आइएस)ले आफ्ना गतिविधिलाई सिरियामा जारी राखेकै बेलामा अमेरिकाले त्यहाँबाट पनि आफ्ना सैनिकहरु फिर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
तालिवान र आईएसलाई अमेरिकाले यस अघि आतंकवादको सूचीमा राख्दै आएको छ । तर, ती क्षेत्रबाट अमेरिका उठ्दा सम्बन्धित देशले आतंकवादी भनिएका संगठनलाई तह लगाउलान् वा ती देशहरु पुनः अतिवादी समूहको पोल्टामा जान्छन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । वा , अन्य मुलुकहरुले अमेरिकाले अहिले लिएको स्थान लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्न कोही तयार छ वा छैन भन्ने पनि अहिले प्रश्न उब्जिएको छ । यी कतिपय गतिविधिले गर्दा विश्वको भावी दिशा कता जाला भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उब्जिएको छ ।
आईएससँग को लड्ला ?
तालिवान समूह अफगानिस्तान र पाकिस्तान क्षेत्रमा चर्चामा रहेपनि आइएस भने नेपालको छिमेकी भारत सम्मपनि बेलाबेलामा चर्चामा आउने गरेको सगठन हो । मुख्यरुपमा सिरियामा केन्द्रीत रहेको त्यसको पकड विश्वका अन्य भूभागमा पनि थोरबहुत रहेको मानिने गरेको छ । समाचार एजेन्सीहरुले जनाएअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भर्खरै सकिएको डिसेम्बर २०१८मा टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआनसँग कन्फेरेन्स कल गरेका थिए । यससँगै सिरियाबाट अमेरिकी सेनालाई फिर्ता लिने फैसला समेत सुनाए । यही कलकै सिलसिलामा ट्रम्पले अर्दोआनलाई सोधे,‘‘ यदि अमेरिका सिरियाबाट बाहिर निस्कियो भने के टर्कीले आइएसको बचेखुचेको अस्तित्व खतम गर्न सक्छ ?’’ अर्दोनानले यसको जवाफमा भनेका थिए,“टर्कीले त्यसो गर्न सक्छ ।”
टर्कीका राष्ट्रपतिको यो जवाफपछि ट्रम्पले कसैसँग सल्लाह नै नलिइकन जवाफ दिएका थिए,‘‘ यदि टर्की यसो गर्न सक्छ भने अमेरिका सिरियाबाट बाहिर निस्कनेवाला छ ।’’ यो कन्फेरेन्स कलमा ट्रम्पको साथमा अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनपनि साथै थिए ।
सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएका तथ्य अनुसार टर्की चाहन्थ्यो कि अमेरिकाले कुर्दिश लडाकूको एउटा संगठन वाइपीजीलाई दिएको आफ्नो हतियार फिर्ता लेओस् । तर अमेरिकाले मानेन । ऊ इस्लामिक स्टेट पुरै खतम भएपछि मात्रै हतियार फिर्ता लिन चाहन्छ ।वाइपीजी त्यो संगठन हो जो सिरियाली युद्धको मैदानमा अमेरिकाका तर्फबाट लड्ने गर्छ र अमेरिकी सेनाको स्थानमा आफ्नो रगत पसिना खर्च गरिरहेको छ । यो क्षेत्रमा अमेरिकाले ५ हजार सेना मात्रै राखेको छ । उनीहरु सैनिक खुफिया जानकारी आदानप्रदान र ड्रोनसँग सम्बन्धित अपरेसनमा काम गर्ने गर्दछन् ।
अनि जमिनमा वाइपीजीका लडाकूहरु युद्ध गरिरहेका छन् । सिरियाली युद्धमा कुनै पनि ठूला देशले आफ्नो स्तरमा कुनै न कुनै संगठनलाई मद्यत गरिरहेका छन् इरानले सिरिया र इराकमा हिजबुल्लाहका लडाकूहरुलाई समर्थन गरिरहेको छ । टर्कीले सिरियाली सरकारको विपक्षी खेमाको समर्थन गर्यो र रुस बशर अल असदको अहिलेको सरकारको समर्थन गरिरहेको छ । अमेरिकाकालागि वाइपीजीले काम गरिरहेको छ । सिरियाको भूमिमा अमेरिकाको नाममा वाइपीजी नामको यही कुर्दिश लडाकु संगठनले काम गरिरहेको हो ।
अमेरिकाले यस संगठनलाई ठूलो परिमाणमा हतियार दिइरहेको छ । जसबाट टर्की अप्ठेरो महसुस गर्छ । टर्कीलाई के लागिरहेको छ भने सिरियाबाट अमेरिका बाहिर गएपछि कुर्दिश लडाकूले सिरियाको उत्तर पूर्वी हिस्सा र इराकको उत्तर पश्चिम भागमा कब्जा गर्ने र आफ्नो एक नयाँ मुलुक खडा गर्ने योजना अगाडि बढाउन सक्छ ।
नयाँ संघर्षको शुरुवात
अमेरिकाका सेना फिर्ता बोलाउने फैसलापछि सिरियामा एक दोस्रो विरुद्ध संघर्षरत छदम संगठन सम्हाल्न मुश्किल हुने अवस्था रहेको छ । अमेरिकाको घोषणापछि वाइपीजीले आफ्नो नियन्त्रण रहेको मंजिब कस्वे सिरियाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने संकेत दिएको छ । त्यहाँ टर्कीले वाइपीजीमाथि टर्कीले हमला गरेमा रुसको समर्थन रहेको सिरियाली सेनालाई पनि हमला गर्नेछ । यही तालमेलको ठेगान लगाउनका लागि रुस र टर्कीका विदेशमन्त्रीहरुबीच गएको शनिबार मस्कोमा संवाद भएको छ । अमेरिका सिरियाबाट बाहिर निस्कने घोषणा गर्नासाथ इजरायलले सिरियामा आफ्नो अभियान शुरु गरेको छ । यो हिसाबले सिरियाली युद्ध क्षेत्रमा बाहिरी तागतको संख्या उति नै हुनेछ जति अमेरिकाको उपस्थितिको समयमा रहेको थियो ।
सिरियाली युद्ध क्षेत्रमा दुनियाँका ठूला देशको उपस्थितिका कारण उनीहरुका लागि फरक फरक फाइदा छन् । रुसको असली हित इरान र सिरियाको साथमा रहेको छ । सिरियामा असद सरकारको उपस्थिति रुसको लागि जरुरी रहेको छ । उदेश्य के हो भने मध्यपूर्वमा सिरिया नै एक मुलुक हो जसको कारणले यो क्षेत्रमा रुस आफ्नो उपस्थिति गराउन सकिरहेको छ ।त्यहाँ इरानपनि शिया बहुल देशको बर्चश्व स्थापित गर्न चाहन्छ । इरान सिरिया, इराक देखि यमन र बहराइन सम्म शिया समर्थित देशका संगठन बनाउन चाहन्छ । टर्कीलाई फाइदा यो क्षेत्रमा कुनैपनि कुर्दिश राज्य नजन्मिदा नै हुन्छ ।
यी सबै पक्षमा अमेरिका एक यस्तो तागत हो जो इस्लामिक स्टेटको साथ संघर्ष गर्न चाहन्छ । अमेरिका सिरियाबाट बाहिर निस्केपछि टर्की र सिरिया इस्लामिक स्टेटसँग पहिला जस्तो संघर्ष गर्ने छैनन् । जसरी अमेरिका गरिरहेको थियो । रुस र सिरियाका सेना इस्लामिक स्टेटलार्य खतम गर्न लाग्ने भन्दापनि असद सरकारका विपक्षी खेमालाई खतम गर्ने कोशिशमा लाग्नेछन्् । यसरी स्वार्थमा जेलिएका सम्बन्धले आगामी विश्वलाई कता लैजान्छ भन्ने कुराको अन्यौल सन् २०१९को शुरु हुने बेलामा अझै बढेको छ ।
ईस्लामिक स्टेट कति बलियो छ ?
ईस्लामिक स्टेटलाई लिएर के आशंका जनाइएको छ भने अहिलेको अवस्थामा ईस्लामिक स्टेटका लडाकु फिर्ता जान सक्छन् । लामो संघर्षपछि उनीहरुले त्यहाँ प्रभाव राखेका छन् । उनीहरुको साथमा अझै करिब ३० हजार लडाकूको तागत रहेको छ । यस कारण वाशिङटनमा यो कुरालाई लिएर चिन्ता जनाउने काम पनि भइरहेको बताइन्छ । उनीहरु फर्किएर इराक वा सिरियाका दुई तीन वठा शहर कब्जा गर्न सक्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति अहिले के भनिरहेका छन् भने अर्को देशको हितको लागि अमेरिकाले आफ्नो खर्च गरेर किन युद्ध लड्ने ? यदि उनीहरुलाई अमेरिकाको मद्धत चाहिन्छ भने उनीहरुले खर्च व्यहोर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनले ल्याएका छन् । खर्चको कुरा गर्दा एक ताका यस्तो थियो कि अमेरिका इराकको लागि ७० अर्ब रुपिया दैनिक खर्च गथ्र्यो । अहिले पनि वर्षको ७ हजार अर्ब रुपैया खर्च गरिरहेको छ । तर सिरियादेखि लिएर इराक तथा रुसको पनि हैसियत अमेरिकाले गरिरहेको खर्च जति खर्च गर्ने हैसियत छैन ।
सिरिया संकट समाधान होला ?
सिरियाली क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिलेका राष्ट्र प्रमुख बसर अल असदले ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा आफ्नो कब्जामा लिएका छन् । तथापि अहिले पनि सिरियाको तेलको कुवा असद सरकारको नियन्त्रणमा छैन । यो अवस्थामा असदको नियन्त्रणमा ६० देखि ७० प्रतिशत भूभागको हिस्सा आगामी दिनमा नियन्त्रणमा जाने सम्भावना भने रहेको छ । बाँकी भागको नियन्त्रण इस्लामिक स्टेट वा वाइपीजी जस्ता संगठनको नियन्त्रणमा जान सक्छ । यो अवस्थाले गर्दा वाइपीजी र टर्कीका सेनाबीच युद्ध जारी रहनेछ । तथापि अरब क्षेत्रले असदलाई फेरि एक पटक स्वीकार गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेका छन् ।
यूएईले एक पटक फेरि दमास्कसमा आफ्नो दूताबास राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । सुडानका राष्ट्रपति जनरल बशीरले असदसँग छलफल गरेका छन् । यो अवस्थामा सन् २०१९को अन्त्यमा मध्यपूर्व यस्तो देखिदैछ कि जुन २०१०मा देखिएको थियो । सबैतिर लोकतान्त्रिक विकासको सट्टा सैन्य तानाशाह देखिनेछन् । इजिप्टका होस्नी मुबारकका स्थानमा अल सीसी तथा सिरियामा असदको स्थानमा असद नै रहेका छन् ।यद्यपि इराक र ट्युनिशियामा लोकतन्त्रकै झलक देख्न सकिन्छ । एउटा कुरा के हो भने सिरिया पहिलाको जस्तै एकीकृत मुलुक बन्नुको सट्टा मध्यपूर्वको अफगानिस्तानमा बदलिने अवस्था रहेको छ । त्यसले विश्वका अन्य मुलुकहरुलाई पनि आगामी दिनमा असर गर्नेछ ।
सकारात्मक समाचार : मिटू अभियानदेखि थाइल्याण्डका १२ बालकको उद्धारसम्म
वाशिङटन पोष्टले विश्वका सकारात्मक घटनाको रुपमा केही घटनालई चर्चामा ल्याएको छ । जस्तो कि १२ जना थाइल्याण्डका बालकलाई उद्धार गरिएको घटनालाई वाशिङटनपोष्टले पहिलो नम्बरमा राखेको छ । गुफामा थुनिएका उनीहरुलाई १०० उद्धार दल, १००० थाइ सिपाही तथा हजारौं स्वयंसेवकले उद्धारका लागि मद्यत गरेका थिए । उनीहरुलाई तीनसाताको अनवरत प्रयासपछि जीवितै उद्धार गरिएको थियो ।
गएको जुन र जुलाई महिनाको तीन हप्ता १२ जना युवा फुटबलर र उनीहरुका कोच थाङ लुवाङ गुफामा थुनिएका थिए । त्यसको स्टोरी सन् २०१९मा धेरै पढिएको स्टोरीको रुपमा बीबीसीले पनि चर्चा गरेको छ । त्यतिबेला जे जस्तो अप्ठेरो अवस्था आइपरेपनि अहिले त्यहाा पर्यटकहरुको त्यस स्थानमा भीड लाग्ने गरेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी भारतको सर्बोच्च अदालतले कन्सेन्सुअल गे सेक्सलाई दिएको मान्यता, स्पेसक्राफट इनसाइट ल्याण्डर मंगलग्रहमा गएको २६ नोभेम्बरमा अवतरण गरेको अवस्था, यो वर्ष इथियोपिया तानाशाहीतन्त्रबाट मुक्त भएर लोकतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरण भएको अवस्था तथा महिलामाथि हुने हिंसालाई लिएर भएका गतिविधिमा मी टू अभियानले बाहिर हेर्दा सज्जन देखिने थुप्रैको मुखुण्डो उतारेको अवस्थालाई पनि वाशिङटन पोष्टले सकारात्मक घटना भनेको छ । यो प्रकरणमा संसारका थुप्रै पुरुषले जागीरबाट हात धुनुपरेको थियो । नेपालमा पनि यो प्रसंग थोरबहुत चर्चामा रहेको थियो ।
सन् २०१८को अप्रिल १७मा दक्षिण र उत्तर कोरियाका शासकहरुबीच संवादको वातावरण उत्पन्न भयो । अप्रिल २७, २०१८मा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाइ इन र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनबीच संयुक्त सुरक्षा क्षेत्रमा संवाद भएको थियो ।
सो संवाद सन् १९५३मा दुई कोरिया विभाजित भएपछिको महत्वपूर्ण घटना भएकोले संसारभरी नै चर्चामा रह्यो । यसबाहेक उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच गएको जुन १२मा सिंगापुरमा भएको दुई पक्षीय वार्ता संसारभरी नै चर्चामा रह्यो । यसअघि दुई देश कहिले युद्धमा उत्रिने हुन् भन्ने अवस्था रहेकोमा उनीहरुबीच संवादको वातावरण सिर्जना हुुनुलाई निश्चयपनि सकारात्मक रुपमा लिएको पाइएको छ । सो संवादका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेताबीच भएको दुई पक्षीय सहमतिमा उत्तर कोरियालाई निसस्त्रिकरण गर्दै जाने कुराको चर्चा गरिएको छ ।
अमेरिकातिरको क्याराभानदेखि मर्केलको विवाह पनि
मध्य अमेरिकी राष्ट्र होण्डुरस लगायत देशका आप्रवासीहरु अमेरिका तर्फ क्याराभानमा संलग्न भएको घटना अमेरिकाका लागि निकै चासोको विषय रह्यो । क्याराभानको विषय अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा ठूलै मसलाको विषय भएको थियो । अमेरिकाले मेक्सिको र मध्य अमेरिकी राष्ट्रलाई चेतावनी समेत दिएको थियो । सोही सिलसिलामा अघिल्लो महिना अर्थात् डिसेम्बर महिनामा भएको अमेरिकी सीमा छिर्ने दौडका क्रममा दुई जना ग्वाटेमालाका बालबालिकाको मृत्यु भएको घटना आलोचनाको विषय भयो ।
यो वर्ष अमेरिकाले जेरुसेलमका आफ्नो दूतावास खोल्ने विषय, अमेरिका चीन ट्रेड वार, फ्रान्सको यलो भेष्ट प्रदर्शन, भारतमा भएको विधान सभा निर्वाचन, भुटानमा नयाँ पार्टी सत्तामा, पाकिस्तानमा क्रिकेट खेलाडीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन र गएको आइतबार मात्रे बंगलादेशमा भएको निर्वाचन परिणाम जस्ता विषयपनि यो वर्ष चर्चाको शिखरमा रहे । मस्कोमा भएको विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सले हासिल गरेको विजय पनि यो वर्षको चर्चित विषय नै मानिएको छ । अमेरिकाको फलोरिडामा रहेको मार्जोरी स्टोनम्यान डग्लस हाइस्कुलमा भएको गोली गाण्ड चर्चामा रह्यो । फेब्रुवरी १७ का दिन भएको सो गोली काण्डमा १७ जना मारिएका थिए । त्यो घटनापछि अमेरिकामा स्वतन्त्र रुपमा बन्दुक चलाउन नपाइने अभियान नै चलेको थियो । सन् २०१८को मे मा बेलायतका राजकुमार ह्यारीसँगको विवाहका कारण मेघल मर्केल पनि उत्तिकै चर्चामा रहिन् ।
पत्रकारका लागि को खतरनाक ?
सन् २०१८मा साउदी पत्रकार जमाल खसोग्जी सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे । उनलाई गएका अक्टोबर २मा टर्कीस्थित साउदी दूतावासमा हत्या गरिएको थियो । सन् २०१८मा विश्वभरी कूल ८० जना पत्रकार मारिएको पत्रकारहरुको विश्वव्यापी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले जनाएको छ । यसैगरी सन् २०१८मा ३४८ जना पत्रकार जेलमा रहेको र ६० जनालाई अस्थायी रुपमा बन्धक बनाइएको जनाइएको छ ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा पत्रकारका लागि सबैभन्दा खतरनाक देशका रुपमा अफगानिस्तानलाई उल्लेख गरिएको छ । जहाँ सन् २०१८मा १५ जना पत्रकार मारिएका छन् । त्यसपछि सिरिया दोस्रो खतरनाक देशमा परेको छ । जहाँ ११ जना पत्रकार मारिएका छन् । त्यसैगरी मेक्सिकोमा पनि ९ जना पत्रकार मारिएकोले तेस्रो खतरनाक देशमा परेको छ । अमेरिकाको क्यापिटल गजेट न्यूजपेपरमा गएको जुन महिनामा भएको आक्रमणमा पत्रकार सहित ५ जनाको मृत्यु भएका कारण अमेरिकापनि यसपालि पत्रकारहरुका लागि खतरनाक स्थानका रुपमा चर्चामा आएको छ । हिरासतमा लिइएका पत्रकार गएको वर्ष यो समयमा ३२६ जना रहेकोमा यसपालि बढेर ३४८ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।